Dadka reer Uganda ayaa u codeeyay qofka saxda ah ee u tartami kara madaxtinimada Uganda tan iyo sanadkii 1986. Yoweri Museveni & fanaanka da’da yar Robert Kyagulanyi, oo ku magac dheer Bobi Wine.
Internet-ka ayaa hawada laga saaray si aysan u carqaladeyn doorashada, waxaana dowladda ay ciidamo badan geysay wadooyinka muhiimka ah iyo goobaha laga cabsi qabo inay ka dhacaan isku dhacyada doorashada.
Haddaba, maxaa ka cusub doorashooyinka Ugaandha 2021?
Codadka ilaa iyo hada la tiriyey ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyey ee Yoweri Museveni, ka hor gudiga doorashada ayaa talaadadii shaaciyey in qabashada codeyntu tahay Kaguto wine.
Museveni ayaa helay 1,536,205 (Hal milyan, shan boqol, soddon & lix kun, laba boqol iyo shan) codad u dhigma (65.02%), halka Robert Kyagulanyi (Bobi Wine) uu hayo 647,146 (Lix boqol, afartan & toddoba kun, Boqol, afartan iyo lix) cod (27.39%), oo laga soo ururiyey 8,310 goobaha codbixinta.
Guud ahaan, goobaha codbixinta way furan yihiin 34, 684, waxaana socota tirinta iyadoo guddiga doorashada ay si hordhac ah u soo gudbinayaan natiijada, oo ay weheliso boqolkiiba codadka labada musharax.
Guddiga doorashada Uganda ayaa sheegay in natiijada loo diri doono goobta doorashada maadaama internet-ka laga xiray guud ahaan dalka, waxaana laga cabsi qabaa inay isku dhacaan taageerayaasha labada musharax kadib markii lagu dhawaaqo natiijada.
Simon Byabakama oo ah gudoomiyaha gudiga ayaa sheegay inay adeegsanayaan hanaan gudaha ah si ay u soo gudbiyaan natiijada, laakiin ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sida ay u awoodaan inay u gudbiyaan xogta iyaga oo aan adeegsan internetka.
Hogaamiyaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ugu yeeray howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM in ay ciidamadooda kala baxaan dalka Soomaaliya.
Shisheeyaha ku nool dalka Uganda oo ay ku jiraan Soomaali ayaa guryahooda kala baxay subaxnimadii Talaadada, iyagoo ka baqaya in rabshado ay ka dhacaan doorashada ka hor, waxayna go’aansadeen inay joojiyaan howlahooda
Xigasho: BBC Axadle.
Frank Lampard ayaa ganaaxay ciyaartoyda Chelsea
Marcus Rashford ayaa ku dhawaaqay casho Jose